धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा १५ जनाको आवेदन, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि १५ जनाको आवेदन परेको छ । पुस १५ गते बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि १५ दिनको म्याद तोकी पुनः आवेदन खुल्ला गरिएको थियो ।
बोर्डको अध्यक्षका लागि डा.गोपाल भट्ट, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल, रमेश अधिकारी, चिरञ्जिवि चापागाईं, डा.नवराज अधिकारी, अम्बिकाप्रसाद शर्मा लामिछाने, कृष्णराज पोखरेल, डा.जीवन अंगाई, रमेशकुमार हमाल, सीताराम थपलिया, डा.केशवप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलराज पौडेल, नीरज गिरी र हेमन्त वस्यालले आवेदन दिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसमध्ये अधिकारी, अर्याल, कटुवाल र पोखरेल नयाँ आवेदक हुन । यसैगरीअघि आवेदन दिएका कृष्णप्रसाद आचार्यले भने नयाँ विज्ञापनमा सहभागिता जनाएनन् ।
यसअघिको सिफारिस समितिको वैधातामाथि प्रश्न उठेको भन्दै नयाँ समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासीनी र विज्ञ सदस्य डा.जीवनाथ भुसालको नेतृत्वमा नयाँ सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलकै संयोजकत्वमा अर्थसचिव मरासिनी र प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको छ । यसअघि पनि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी, उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले आवेदन दिएका थिए ।
यसअघि कात्तिक ११ गतेको आवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा.गोपाल भट्ट, कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्य, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्व महाप्रबन्धक थपलिया र बिमा समितका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागागाईंलगायत १२ जनाले आवेदन दिएका थिए ।
१५ जना आवेदकहरु मध्ये व्यवासायिक योजना प्रस्तुत गर्नेहरु मध्येबाट समितिले ३ जना छनौट गरेर अर्थमा पठाउने छ । अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरेका ३ मध्ये एक जना बोर्डको अध्यक्षमा चयन हुने छन् ।
बिहीबार २९ पुस २०७८ ०६:१६ PM मा प्रकाशित